MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: Siddhārtha Hlaing Tape (or) Thu Kha Main Hlaing Tape (သိဒ္ဓတ္ထလှိုင် တိပ်ခွေ)
Siddhārtha Hlaing Tape (or) Thu Kha Main Hlaing Tape (သိဒ္ဓတ္ထလှိုင် တိပ်ခွေ)
သိဒ္ဓတ္ထလှိုင် တိပ်ခွေ (သို့မဟုတ်) သုခမိန်လှိုင် တိပ်ခွေ
ကျနော် ချစ်ခင် ခံစားရတဲ့ ကဗျာ ဆရာငယ် "မောင်သစ်မင်း" ရဲ့ "တေးမြုံငှက်" မှာ ဒီ "တိပ်ခွေ" ကိုဖွင့်ဘို့ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်ရဲ့ "အနုပညာများ" နဲ့ "တိပ်ခွေ" ကို ရဘို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ရစဉ် "၇" နှစ်ကာလထဲမှာ ဆင်းရဲမှုများ၊ ပင်ပန်းနွမ်းကြေ ခဲ့ရမှုများ၊ ခြောက်သွေ့ရှတတဲ့ နေ့များကို ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတဲ့ "သိဒ္ဓတ္ထလှိုင်" ရဲ့ "ဝေေ၀"၊ "တာရာသိဒ္ဓတ္ထ" နဲ့ "ဒဏ္ဍာရီဝေေ၀" တို့ကို ကျေးဇူးတင်ခဲ့ကြောင်းကိုတော့ "ဟောဒီကမ္ဘာကြီး" ဟာ မရှိခဲ့တော့ရင်တောင်မှ တုန်ခါပဲ့တင်ထပ်နေမဲ့ အသံတသံအဖြစ် ထားရစ်ခဲ့ပါတယ် ။
Siddhārtha Hlaing is an another, previous Pen-name of Thu Kha Main Hlaing.
"Siddhārtha Hlaing Tape" was released in Maung Thit Min's fiction: "Tay Myone Nget" (Song Nesting Bird) - firstly printed (1977).
In next printed Tay Myone Nget Books, Siddhārtha Hlaing Tape was not published any more.
မောင်သစ်မင်း၏ တေးမြုံငှက် ၀တ္ထုစာအုပ် (ပထမအကြိမ်ထုတ် - ၁၉၇၇) ၏ ရှေ့ပိုင်းတွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့သော သုခမိန်လှိုင် (ထိုစဉ်က "သိဒ္ဓတ္ထလှိုင်" ကလောင်အမည်နှင့်) ၏ "သိဒ္ဓတ္ထလှိုင်တိပ်ခွေ" ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
မောင်သစ်မင်း၏ နောက်အကြိမ်ထုတ်(ပြန်ရိုက်) "တေးမြုံငှက်" ၀တ္ထုစာအုပ်များတွင်တော့ "သိဒ္ဓတ္ထလှိုင် တိပ်ခွေ" ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း မရှိတော့ပါ။
Posted by Nyo Gyi at 2.6.11
Labels: MUSIC, OTHERS' WRITINGS, PHOTOS
သုခမိန်လှိူင် စာအုပ်တော့ ဒေါင်း သွားပါပြီ။
မောင်သစ်မင်း ၏ "တေးမြုံငှက်" စာအုပ် Ebook ရရင် လိုချင်လို့ပါ။
Siddhārtha Hlaing Tape (or) Thu Kha Main Hlaing Ta...